Andiana taksiborosy notafihan’ny jiolahy : efa nivadika, mbola voaroba ihany ny mpandeha tao amin’ilay Sprinter | NewsMada
Andiana taksiborosy notafihan’ny jiolahy : efa nivadika, mbola voaroba ihany ny mpandeha tao amin’ilay Sprinter
Notafihan’ny jiolahy, teo amin’ny toerana mialoha ny hidirana ny Camp Robin (RN 7), omaly vao maraina be, ny andiana taksiborosy hihazo an’i Fianarantsoa. Na dia efa nivadika tanaty hantsana aza ny Sprinter iray, mbola norobain’ny jiolahy ihany ireo mpandeha. Nisy no naratra mafy voakapa famaky teo amin’ny lohany…
Teo amin’ny 5 km avaratr’i Camp Robin no nisehoan’ny fanafihana ka ireo fiara nanao andiany avy aty Antananarivo ho any Manakara sy Fianarantsoa ireo voatafika ireo. Tsy nahasakana ireo olon-dratsy ny nanafika ireo taksiborosy ireo na efa misy aza ireo zandarin’ny FIGN manaraka ireo fiara manao tomandavana.
Ny fiara tany amin’ny laharana voalohany sy faharoa no voatafika tamin’izany. Somary taraiky kely ireo tao aoriana, indrindra ireo nitondra ireo zandary mpanaraka fiara. Teo amin’ny fiolahana kely mialoha ny hidirana ny faritra misy an’i Camp Robin no nametraka sakana ireo jiolahy. Tora-bato avy hatrany ny nataon’ireo dahalo ireo fiara roa voalohany. Niezaka niala ny iray ka nifatratra tany anaty tevana ary nivadibadika vao tafajanona. Nohararaotin’ireo dahalo izany nandrobana ireo olona tao anaty fiara efa naratra. “Nitaky ny vola avy hatrany ireo jiolahy. Ramatoa iray nitondra vola 5 tapitrisa Ar voakapan’ny famaky ary lasa ny volany. Voaroba izay entana azo noraisin’ireo jiolahy”, hoy ny fitantaran’ny mpamily. Tao anatin’ny minitra vitsy monja nandroban’ireo dahalo ireo mpandeha.
Ilay fiara faharoa kosa tafaporitsaka na vaky aza ny fitaratry ny fiara ka nandratra ny mpamily sy ny mpandeha.
Fotoana vitsy taorian’izay vao tonga ireo fiara nitondra ireo zandary ka nitfitra avy hatrany nanao fampitahorana ireo dahalo. Namaly tifitra ihany koa ireto farany, izay voalan’ny mpandeha fa naharitra ora iray izany. “Efa ho ora iray teo ny nisian’ny fifampitifirana. Raha tsy nisy ny fanipazana grenady, tsy nitsoaka ireo dahalo”, hoy ny mpandeha iray nitantara.
Tsy nisy tratra ireo mpanafika na iray aza, voatosik’ireo zandary fotsiny izy ireo, ary nanala barazy ireo FIGN. Tsy nisy ny fanarahan-dia natao fa niantoka ny fiarovana ny mpandeha sy nitondra ireo naratra tany amin’ny hopitaly no natao. Efa tamin’ny 5 ora maraina vao afaka nanohy ny lalany ireo taksiborosy.
Tsy matahotra zandary
Raha ity tranga ity, tsy matahotra zandary intsony ireo dahalo. Efa hainy fa manao toman-davana ny fiara mandeha ary misy zandary nanaraka, kanefa tsy nahasakana azy ireo tsy hanafika izany. Mipetraka kosa anefa ny fanontaniana, nahoana no tany amin’ny fiara tany aoriana no nisy zandary fa tsy ny teo aloha indrindra? Ahoana no nahalalan’ny jiolahy fa misy vola 5 tapitrisa Ar tao amin’ny fiara faharoa nisy ilay ramatoa voakapan’ny famaky?
Misy ny firaisana tsikombakomba ao, ary azo antoka izany. Ny fisavana ny mpandeha sy ny famarinana azy ireo, toy ireny any amin’ny seranam-piaramanidina ireny, mety vahaolana manampy amin’ny fisorohana izany. Ao anaty fiara ihany ny mpiray tendro amin’ny jiolahy. Mila manana paik’ady mipetraka tsara ihany koa ny mpitandro filaminana anaty fiara sy eny amin’ny lalam-pirenena hisorohana izany fanafihana izany. Tsy mbola matotra anefa io matoa mbola misy ny fanafihana.